LIISKA Mil Mi-26 FSX & P3D - Rikoooo
Moodeliska hawada, waxaa cusboonaysiiyay Michael Pook, oo u dhashay FSX/P3D cusboonaysiiya Rikoooo
Updated on 30 / 04 / 2019: Prepar3D v4 la jaan qaada, u beddelaad u dhaleed FSX/P3DQaabka v4
Xirmada qoreysa a saxo oo dhameystirtay VC cusub iyo guddi 2D, tan caadiga ah VC ma qabto wax aaladaha functional iyo lahaa bitmap a khaldan in fayl dareen taabasho ah, si qaybta bidix VC iyo xaq iyo geesood tagay ahaayeen cad.
Waxay sidoo kale soo bandhigtay guddi cusub oo loo yaqaan '2D panel', oo markii hore loogu talagalay Vladimir Zhyhulskiy oo loogu talagalay isaga FSX nooca, laakiin hadda wax laga beddelay si loo waafajiyo VC. Xidhmada ayaa sidoo kale ku jirta waxyeelo sigaar ah. Naqshadaynta cusub ee VC iyo 2D guddiga iyo qaabeynta Michael Pook. Moodeel Alfaasiim.
The mil Mi-26 (Ruush: Миль Ми-26, NATO warbixinta magaca: HALO), siin code saarka izdeliye 90, waa helicopter ah Soviet / Ruush gaadiidka culus. In adeegyada la shaqeeya dadka rayidka ah iyo military, waa helicopter ugu weyn oo ugu awooda badan abid ayaa galay wax soo saarka.
Design: In 1970s ah, Midowga Soofiyeeti doonayay inuu bedelka u-Mi 6 laakiin qaab badan. noocooda A hore ka dibna la dhisay, marka hore u duulay on December 14 1977 tijaabooyin Hawlgalada ciidanka Soviet bilaabay horraantii 1982, u galeen adeegga sanadka soo socda. February 3, 1982, wuxuu ku dhisay dhowr diiwaanka dunida, ay ka mid yihiin diyaarad at miisaanka ugu badnaan (raran) ee 56,769 kg in 2,000 mitir. (Wikipedia)
Qore: Moodeel airfilips, waxaa cusbooneysiiyay Michael Pook, oo u dhashay FSX/P3D cusboonaysiiya Rikoooo